Internet မလိုဘဲ Messages တွေပို့နိုင်တဲ့ Bridgefy ဆိုတာ... — Anycall Mobile
By RKhar M Thant February 2, 20213Mins Read
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ မနေ့ကလိုမျိုး ဖုန်းလိုင်းတွေ အကုန် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ အရေးပေါ်သုံးလို့ရမယ့် Offline Chat App တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် App လဲဆိုတော့ အားလုံးလည်း သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်တဲ့ (လိုင်းပေါ်မှာလည်း ပြန်နေ့ပြီပေါ့နော်) Bridgefy ပါပဲ။ ဆိုတော့ Bridgefy ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကို မပြောခင် အရင်ဆုံး Bridgefy ဆိုတာဘာလဲ ? နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြချင်တယ်။
Bridgefy ကို အခု တချို့လူတွေနားလည်နေကြတာက ဒီ App နဲ့ဆိုရင် ရန်ကုန်ကနေ မန္တလေး(အဝေးကြီး) ကို အင်တာနက်မလိုဘဲ Message တွေလှမ်းပို့လို့ရတယ်လို့ နားလည်နေကြတယ်။ တချို့ကလည်း Bluetooth Connection ကိုသုံးတယ် အဝေးကြီးမရဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကို သိကြတယ်ပေါ့နော်။ ဒီနေ့မှာတော့ အဲ့ဒီအကြောင်းကို သေသေချာချာ ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Bridgefy ဆိုတာ ဘာလဲ ?
Difference between Mobile & Mesh Networks (Photo – Internet)
ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းသုံးနေတာက Mobile Network ပါ။ ဒီ Mobile Network မှာ ဖုန်းတစ်လုံးက တိုင်ကိုသွားချိတ်တယ်။ ပြီးတော့မှ တဖက်ဖုန်းဆီကိုရောက်တယ်။ အဲ့လိုနည်းနဲ့ ဖုန်းနှစ်လုံး connection(အဆက်အသွယ်) ရပါတယ်။ ဖြစ်သွားတဲ့ Process တွေကသာ မြန်လွန်းလို့ သိပ်မကြာဘူးလို့ထင်ရတာပါ။ Bridgefy ဆိုတာ Mesh Network တစ်ခုပါ။
သူက ဖုန်းတစ်လုံးကနေတစ်လုံးကို သွားချိတ်ပြီး Connection ရတယ်။ (အလယ်ကကြားခံမလိုပါဘူး) ဥပမာ Bluetooth တို့၊ Wifi တို့ပေါ့။ အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့် Bridgefy ကတော့ Bluetooth ကိုသုံးပါတယ်။ Bluetooth သွားနိုင်တဲ့ Range(အကွာအဝေး)အတွင်းမှာ ဖုန်းနှစ်လုံး စာတွေပို့ပြီး စကားတွေပြောလို့ရပါတယ်။
ဒီ Mesh Network ရဲ့အားသာချက်က ဖုန်းတစ်လုံးကနေ တစ်လုံးကို တိုက်ရိုက်သွားချိတ်တာမို့လို့ အလယ်က ကြားခံ Network တိုင်တွေမလိုဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဖုန်းလိုင်းတွေ၊ အင်တာနက်လိုင်းတွေ ပြတ်တောက်သွားတဲ့ အချိန်တွေမှာ သုံးလို့ရပါတယ်။
Bridgefy App Icon – Anycall Mobile
အိုကေ အခု Bridgefy က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ ? ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးခဲ့သလဲ ဆိုတာကို သိသွားပြီဆိုတော့ ကိုယ်တွေ ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကို တချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင် !
Bridgefy ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ ?
အရင်ဆုံး PlayStore ကနေ Bridgefy App ကိုဒေါင်းလိုက်ပါ။
Download Bridgefy App from Playstore
ဒေါင်းပြီးရင် ဝင်လိုက်ပါ။ သူတို့အကြောင်း Intro တွေဘာညာတွေပြလိမ့်မယ် ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါ။
Get Started ဆိုတဲ့ Button လေးကိုနှိပ်ပေးပါ။
အိုကေ ဒီနေရာမှာ တချို့လူတွေဆီမှာ An internal error occurred ဆိုတဲ့ Error တက်ပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် Internet ခဏဖွင့်ပေးပြီး နှိပ်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။
Step by Step Setup – Anycall Mobile
Offline လို့ပြောပေမယ့် ဒီနေရာမှာတော့ ခဏ Internet လိုအပ်ပါတယ်နော်။ အဲ့ဒါကြောင့် လိုင်းတွေထပ်မပြတ်သွားခင်မှာ ကြိုပြီးတော့ Setup လုပ်ထားကြဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်..
ပြီးရင် App ထဲမှာ ပေါ်စေချင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Nickname ကိုပေးပါ။ ပြီးရင် Complete Setup ဆိုတာကို နှိပ်ပါ။ (တစ်ချက်တည်း မရရင် နှစ်ချက် သုံးချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါ။)
ပြီးရင် သူက Bluetooth နဲ့ Location Permission တောင်းပါလိမ့်မယ်။ အောက်က Next ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး Permission တွေကို Allow လုပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် Bridgefy App ကိုသုံးလို့ရပါပြီ။
Bridgefy မှာ Message ပို့လို့ရတဲ့ပုံစံ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ပထမတစ်ခုက Broadcast ပါ။ သူက ဒီအနီးအနားမှာရှိနေတဲ့ တခြား Bridgefy သုံးတဲ့သူတွေအကုန်လုံး ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ Message ကိုမြင်ရမှာပါ။ (ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့လျှို့ဝှက်အပ်တဲ့ Info တွေကို Broadcast Mode မှာ မပို့ဖို့ သေချာလေး အကြံပေးချင်ပါတယ်။)
နောက်တစ်ခုက Private Message ပါ။ ဟိုဘက်ဒီဘက်နှစ်ယောက်ပဲ သီးသန့်ပို့လို့ရမယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအတိုင်းတော့ ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့သူကို သွားပြီး Friend Add တာတွေဘာတွေလုပ်ပြီးပို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ အရင်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ Broadcast ထဲမှာ တစ်ခုခုပို့လိုက်ရပါမယ်။ အဲ့ဒီကနေပြီး ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့အကောင့် Profile ကိုနှိပ်ပြီး Send Private Message ဆိုတာကို တချက်နှိပ်ပြီးပြောလို့ရပါပြီ။
ဒါဆိုဟုတ်ပါပြီ။ Play Store မှာလည်း တခြား Bluetooth Messaging App တွေအများကြီးရှိရဲ့သားနဲ့ ဒီ Bridgefy ကိုဘာ့ကြောင့်သုံးရမှာလဲ ?
Bridgefy ရဲ့အားသားချက်က User တစ်ယောက်က Bridge(တံတား) တစ်ခုလိုအလုပ်လုပ်နိုင်တာကြောင့်မို့ပါ။ ဥပမာ ဒီ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ပေ 200 ဝေးနေတယ်ဆိုပါစို့။ သူတို့နှစ်ယောက်က ဒီအတိုင်း Bridgefy မှာ စကားပြောလို့ မရသေးဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Bridgefy က အများဆုံးမှ ပေ (100) အကွာအဝေးပဲရတာမို့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အလယ်မှာ တခြား Bridgefy User တစ်ယောက်က ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ ပေ 300 အကွာအဝေးက လူနှစ်ယောက်က Connection ရပြီး စကားပြောလို့ရသွားပါပြီ။ ဖုန်းဘေမကုန်ဘဲ Message တွေပို့လို့ရပြီ။ သုံးတဲ့သူများလေ Connection အကွာအဝေး Range က ကျယ်လေလေပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့က Bridgefy ကိုသုံးရတာပါ။
အိုကေ အဲ့ဒါဆို ဒီ App ကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ အသုံးများလဲ ?
အများစုကတော့ တောင်တက်တဲ့အဖွဲ့တွေမှာ အသုံးများတယ်။ ဖုန်းလိုင်းတွေမရတဲ့ တောကြိုတောင်ကြားမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အဆက်အသွယ်ပြတ်မသွားစေဖို့သုံးကြတယ်။ အစောပိုင်းကပြောခဲ့သလို အင်တာနက်မရတဲ့အချိန်မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အဆက်သွယ်ရစေဖို့သုံးကြတာလည်းရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ မနေ့ကလို ဖုန်းလိုင်းတွေရော အင်တာနက်လိုင်းတွေပါ ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်း သုံးလို့ရတာပေါ့လေ။ တချက်သတိထားရမှာက ဒီ App က Bluetooth ကိုသုံးတာမို့လို့ အဝေးကြီးတော့ ပြောလို့မရဘူး။ နံရံအတားအဆီးတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာ ပေ (100) လောက်ရပြီး နံရံအကာအကွယ်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ ခန့်မှန်းချေ ပေ (၄၀) (၅၀) လောက်ပဲ ချိတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တခြား User တစ်ယောက်က ကြားခံနေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ လူတွေများရင် များသလောက်အဝေးကြီးကို ချိတ်ပြီး ပြောလို့ရမှာပါ။
Mesh Network – Anycall Mobile
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အခုစာကိုဖတ်နေတဲ့ Anycall Mobile ရဲ့ Reader တွေလည်း တတ်နိုင်သလောက် အိမ်မှာပဲနေကြပါ။ တကယ်လို့ လိုင်းတွေအရင်လိုပြတ်သွားတယ်ဆိုရင် သုံးလို့ရအောင်လို့ တစ်မိသားစုလုံးရဲ့ဖုန်းတွေမှာ Bridgefy ထည့်ထားပါ။ စစချင်း Setup လုပ်ရင် အင်တာနက်လိုတာမို့လို့ အင်တာနက်ရတုန်းမှာ Setup လုပ်ထားဖို့ အကြံပေးပါတယ်။ အိုကေ ဒါဆို အားလုံးပဲ Stay Safe ! ပါလို့ပြောရင်း အခုလက်ရှိ Bridgefy သုံးနေကြတဲ့သူတွေရှိလား ? သုံးရတာ စမ်းကြည့်ရတာ အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုတာကို အောက်မှာ Comment ပေးသွားကြပါဦး။